Soo-saare iyo Qalab istiraatiijiyad isku-dhafan oo Wanaagsan | Fepton
Qallalan iyo qoyaan isku laalaab ah
Faahfaahinta Halbeegga Farsamada
1. Ka dalbo qolka qalliinka, qolka endoscope, qolka suuxinta iyo qeybaha isbitaalka iwm
2. Waxaa lagu heli karaa hal gacan iyo laba jibbaar gacmeed .Wadashaqeyn kastaa waxay leedahay kala duwanaansho wareeg ah illaa degree350 degree.
3. Saqafka la rakibay iyo nooca derbiga la saaray.
4. Tiirka suunka waxaa loo qaabeyn karaa si loo waafajiyo noocyada kala duwan ee gaaska caafimaadka iyo qalabka korontada.
5. Hal gacan, wareeg, xagal wareeg ah350 darajo.
6. Daawaha aluminium ee xoogga sare leh, xidho-si fiican u yaree qiimahaaga
7. midab buluug ah, casaan iyo wixii la mid ah
8.caawinta waa la heli karaa.
9.German / Ingiriiska / Ameerika / Jabbaan / Faransiis / Shiinka gaaska caadiga ka ah ee ikhtiyaariga ah.
10. Wareegtada isweydaarsiga
1. Waxyaabaha rakibidda oo gundhig ah
Dhammaan qaybaha si wanaagsan loo rakibay waa kuwo aan xaddidneyn, la duubay, alumina lagu dahaadhay awood gaar ah ama anodized, taas oo aad ugu habboon nadiifinta iyo jeermiska
2. Qaab dhismeedka gudaha oo aamin ah oo lagu kalsoonaan karo
Tuubooyinka gaaska caafimaadka iyo khadadka korantada waxaa loogu talagalay in lagu gaaro kala-goynta runta ah ee wareegyada gaaska iyo wareegyada iyadoo loo marayo naqshad gaar ah.
Dhammaan fiilooyinka, tuubooyinka iyo boosteejooyinka si adag ayaa loola socdaa si loo hubiyo isticmaalka muddada dheer ee nabdoon.
3. Xalalka lifaaqa ee kaladuwan
Sanduuqyada taarikada guurguura ama qalabka elektarooniga ah iyo qorshooyinka kale ee xamuulka qaada, waxaa lagu qalabeyn karaa qalab caafimaad oo kala duwan si loola kulmo bukaan socod eegtooyin kala duwan.
Qalabka jaangooyuhu wuxuu ku qalabeysan yahay waddo caalami ah, taas oo taageeri karta qalab dheeri ah.
4. Nidaamka isdhexgalka heerka caalamiga ah
Hawada isku-dhafan iyo sanduuqa kala-goynta korantada shuruudaha ugu muhiimsan ee alaabada aluminium ee xoogga sare leh, naqshadeynta oo dhan oo xiran, dusha sare ma leh xagal ba'an, majiro wax soo bandhig ah.
Qalabka C Nooca Isbitaalka Qalabka Qoyan iyo Shaqada Qalalan ee Caafimaadka Buundada Gaaska Terminal ICU Pendant Bridge, waxaan heysanaa waxyaabo badan oo isku dhafan oo kala duwan qalabka buundada caafimaadka. Waa kuwan qaar ka mid ah sawirrada tixraacaaga. Haddii aad leedahay shuruudo gaar ah oo ku saabsan heerarka gaaska caafimaadka, qty, noocyada iyo qty ee godadka korantada, khaanadda, faleebada faleebada, shelf iyo sidoo kale dambiilo iwm, fadlan nala soo socodsii. Waxaan si fiican u dabooli karnaa baahiyahaaga.
Shanghai Fepton Medical Qalabka Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2011, oo ku taal aagga Shanghai Pudong New. Shirkadda waxaa iska leh degmada Nanhui.
Waxaa jira saldhig cilmi baaris caafimaad iyo saldhig horumarineed oo ku yaal degmada Nanhui ee shirkadda & tikniyoolajiyad sare oo aan lahayn, saldhig cilmi baaris iyo cilmi baaris ah
Degmada Zhangjiang iyo shirkad hoosaadka Nanjing oo dhismaheedu socdo. Shirkadda, oo leh awoodda tiknoolajiyada hodanka ah iyo hibada farsamada, ayaa diiradda saareysa
horumarinta, qaabeynta iyo iibinta qalabka kaabayaasha caafimaadka, qalabka injineernimada gaaska iyo nidaamka xakamaynta caqliga. Wax soo saarka ugu muhiimsan waa
Nalalka taxanaha LED-ka ee aan hooska lahayn, laambad hooska qalliin ficil-celin isku-dhafan, qalabka saqafka saqafka caafimaad lagu rakibo, Qalabka ICU, nidaamka gaaska caafimaadka,
mashiinka faaruqinta, iwm. Waxaan u hoggaansami doonnaa mabaadi'da ganacsi ee dadka ku dhisan, caqiidada wanaagsan, waxaanna abuuri doonnaa qiime bulsho oo weyn.
Hore: HM-8000 qalalan iyo kala qoqobnaan qoyan penda
Xiga: Isku xirnaanta qoyan